Tinye maka visa ndị China maka Canton Fair
Tinye maka Visa China
Ihe ngosi nke 129 nke mbubata na mbupụ China (Canton Fair 2021 Mmiri) a ga - eme na ntanetị site na Eprel 15 ruo 24th.
Fromnye sitere na mba ndị na-enweghị Amụma mkpuchi enweghị nke China, biko tinye maka visa ndị China (ụdị ọ bụla, nke a na-abụkarị "M") yana Inkù maka Canton Fair tupu ị gawa China.
72 / 144 awa Visa Visa Iwu Mbepụ. (Ajụjụ na Azịza na 72-hour Transit Visa Exemption Policy)
Ndị ọrụ gọọmentị Canton Fair kpọrọ oku naanị aha Onye Asị, Mba, na Aha Companylọ Ọrụ. Ọtụtụ mgbe, ọkpụkpọ òkù sitere na ụlọ ọrụ ọ bụla nke China ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmahịa nke mba ọzọ (ụlọ ọrụ) na-arụ ọrụ ndị ọzọ maka ngwa visa ndị China. Biko jiri nlezianya rịba ama na òkù nke Canton Fair nyere nwere ike inyere gị aka inweta Visa ndị China, mana ọ dabere na Emlọ Ọrụ Embassy nke China na mba gị.